IBlue Bay Cove SV2 - Okunethezeka Okuthengekayo
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Florence
Uma izinsuku zethu zingatholakali ngezinsuku ozifisayo, bheka i-Blue Bay Cove - SV1, ifulethi elifanayo nelisha ku-Airbnb. IBlue Bay Cove iyiKhaya Lamaholide likanokusho, elifakwe ngokuphelele ukuze uzizwe njengekhaya kude nasekhaya. Ngokubuka okumangalisayo nokuzolile kolwandle, ukufinyelela olwandle, ichibi, kanye nepulani elivulekile lasekhaya, leli fulethi lilungele abantu abangu-4. Amafulethi anesevisi ephelele nge-Wifi Yamahhala, i-Netflix, ukugcinwa kwendlu nsuku zonke kanye nesevisi yokuwasha. Futhi siyayithobela i-covid.
Nge-Wifi Yamahhala enikezwa wonke amaklayenti, silwela ukuqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuntofontofo ngangokunokwenzeka. Ikhishi elihlome ngokuphelele elihlanganisa isiqandisi, ihhavini, umshini wokugeza izitsha, i-microwave, umenzi wekhofi, i-toaster nezinto ezibalulekile zokupheka kuyatholakala kuwo wonke amaklayenti.
4.65 ·106 okushiwo abanye
4.65 · 106 okushiwo abanye
Abasebenzi bangasiza ukuhlela imisebenzi efana nokubuka izinyoni, ukudoba, igalofu kanye ne-snorkelling. I-Watamu Marine National Park ingaphansi kwamakhilomitha ayi-10.
I’m a happy go lucky girl that likes to travel
Lapho Ufika, Umphathi Wendlu uzokwamukela, futhi aqinisekise ukuthi unakho konke okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kube ntofontofo ngangokunokwenzeka. IBlue Bay Cove itholakala endaweni ephephile futhi enobungane futhi uMphathi Wendlu uzokwazi ukukweluleka ngezindawo zokudlela ezidumile ezihamba ibanga elide ukusuka kule ndawo.
Lapho Ufika, Umphathi Wendlu uzokwamukela, futhi aqinisekise ukuthi unakho konke okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kube ntofontofo ngangokunokwenzeka. IBlue Bay Cove itholakal…